Apple gbasaa usoro ihe omume ọha na eze na tvOS | Esi m mac
Nyaahụ mechara bụrụ oge na ndị Apple Fans na ndị hụrụ teknụzụ n'ozuzu ha na-eche, otu n'ime ihe omume teknụzụ kachasị mkpa na nke kachasị mkpa nke afọ, Nzukọ Nzukọ Mmepe zuru ụwa ọnụ. Na ọhụrụ Macs, iPads ọhụrụ, igwe okwu ohuru, sistemụ arụmọrụ ọhụrụ, na nnukwu ọganiihu na ọgụgụ isi na emepụta eziokwu, WWDC 2017 abụrụla otu n'ime ọtụtụ amaara ama.
Agbanyeghi na ohuru Apple TV ohuru na abia ohuru nke tvOS 11 sistemu eji aru oru ka ebuputara na nkeji mbu n’enweghi ozi di nkpa karia ekwuwaputa Amazon Prime Vide ọdịdama ọ bụ "mgbe e mesịrị", nnukwu ihe ọhụụ bụ na, A ga-etinye tvOS na mmemme beta ọha maka oge izizi nke ụlọ ọrụ.
1 tvOS sonyere Mmemme Beta Ọha na Apple
2 Kedu otu mgbe anyị ga-esi wụnye beta nke ọha nke tvOS 11 na ngwaọrụ Apple TV anyị?
tvOS sonyere Mmemme Beta Ọha na Apple
Gbaso inaugural WWDC 2017 ogbako emere ụnyaahụ site na San Jose, California, Apple emelitere weebụsaịtị Beta Software Mmemme iji kpọsaa na iOS 11, macOS High Sierra, na tvOS 11 Public Betas Ga-adị maka beta testers n'ọdịnihu dị nso.
N'agbanyeghị ụkọ ozi ọma maka sistemụ arụmọrụ nke igbe dị n'elu-apụl nke apụl bitten, n'eziokwu, naanị ihe ọhụụ anaghị emetụta sistemụ arụmọrụ mana ọ bụ ọkwa nke ọbịbịa nke ọrụ vidiyo gụgharia Amazon Prime Video, mmeghe nke usoro tvOS na mmemme beta nke ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ akụkọ dị mkpa dịka ọ dị n'ụzọ a ọtụtụ ndị ọrụ ga-enwe ike ịchọpụta ezigbo ọrụ nke akụkọ ahụ ma si otú belata Ohere nke njehie ozugbo ukara igba egbe emee.
Ruo ọtụtụ afọ ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ emeela macOS na iOS ọha na eze betas dịịrị onye ọ bụla chọrọ, mgbe ndebanye aha, na-enye ohere ma ndị mmepe na ndị ọrụ iji nwalee atụmatụ ngwanrọ ọhụrụ tupu ịhapụ ọha na eze, nke na-eme ka nchọpụta, mgbazi na mmelite nke ọdịda na njehie na-aga n'ihu, nke a bu oge izizi eji etinye tvOS na mmemme a.
Kedu otu mgbe anyị ga-esi wụnye beta nke ọha nke tvOS 11 na ngwaọrụ Apple TV anyị?
N’oge dị mkpirikpi, ndị na-abụghị ndị mmepe edebanyere aha ga-enwe ike ịwụnye ngwanrọ tvOS beta na Apple TV ha. O sina dị, usoro a agagh adi nfe dika iOS ma obu macOS na, mgbe ị wụnye profaịlụ kwekọrọ, ị na-ebudata ya, ọ dị ka a ga - asị na ọ bụ nsụgharị gọọmentị, site na ngalaba "Nwelite ngwanrọ", ma ọ bụ, ma ọ dịkarịa ala, ọ gaghị adị mfe na mbụ.
Ndị ọrụ chọrọ isonye ga-ebu ụzọ debanye aha maka usoro ihe omume beta nke Apple, ma ọ bụrụ na ahaghị aha ha. Mgbe ha mechara nzọụkwụ a dị mkpa, ha ga-enwe ike ibudata ngwugwu tvOS 11 beta na Macs ha; Nke a ga-arụnyere na Apple TV site na iTunes, nke ị ga-emerịrị jikọọ Apple TV na kọmputa site na iji eriri USB-C. Site mgbe ahụ gaa n'ihu, mmelite ndị ga - esochi ga - abata n'ụzọ ọ bụla site na OTA (n'ikuku).
Ọ bụ ezie na nke a abụghị ihe mgbochi a na-apụghị imeri emeri, ọ bụ eziokwu na ihe nrụnye chọrọ dịtụ mgbagwoju anya ma na-eri oge karịa iOS ma ọ bụ macOS na nke a nwere ike bụrụ ihe kpatara na etinyeghị beta beta nke tvOS na mmemme ahụ beta.
Banyere ụbọchị nnweta ya, beta mbụ nke tvOS 11 adịlarị maka ndị mmepe, yana nke usoro ndị ọzọ. Agbanyeghị, n'oge isi okwu ahụ, Apple kwuru na mOS na macOS High Sierra ga-abụ dị na nsụgharị beta nke ọha na njedebe nke June, n'ihi ya, a ga-atụ anya na tvOS 11 ga-adịkwa n'ụbọchị ahụ.
Banyere atụmatụ na ozi ọma, dịka anyị kwurula, Apple akọwapụtabeghị ihe tvOS 11 na-eweghachi, nke na-egosi na ọ ga-abụ nsụgharị lekwasịrị anya na ndozi arụmọrụ. Naanị akụkọ a kpọtụrụ aha bụ ọbịbịa Amazon Prime Video na-abịa na Apple TV, ikekwe mgbe oge ọkọchị gasịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Apple na-agbasawanye usoro mmemme ọha na eze na tvOS